> Resource > Video > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka SD Card
Waxaa suurto gal ah inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka My SD Card?
Hi waxaa, waxaan haysan kaarka SD Kingston oo badan videos rido. Wax dhibaato ah oo weyn dhawaan. Waxaan si qalad ah la tirtiro 3 video ka card aan SD oo waxaan jeclaan lahaa inaan mar kale la soo celiyo. Ma jiraa qof halkan sheeko guusha ku saabsan sida inuu ka soo kabsado tirtiray video ka card SD?
Jawaabtu waa haa gabi ahaanba. Videos Your tirtiray aan si joogto ah la waayay ka card SD aad. Waxay noqonayaan kuwo kaliya geli karin ka hor xogta cusub daboolo. Taas macnaheedu waa in aad u baahan tahay in ay sii card SD aad la isticmaalin haddii aad rabto inuu ka soo kabsado tirtiray videos ka. Ka dibna waxaad u iman kartaa inaad internet si aad u hesho barnaamijka xog ah si ay kuu caawiyaan.
Waxaan u Khushuucdo Dartiis talinaynaa Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac aad u. Waa doorasho kama dambaysta ah inuu ka soo kabsado lumay videos ka card SD, iyadoo aan loo eegayn video ah uu lumo sababta oo ah baadi nidaamka, formatting card ama tirtirka shil ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in lagu xiro card SD aad kombiyuutarka iyo ordi Wondershare Photo Recovery si aad u baadhid videos lumay waxa ku jira.
Waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah Wondershare Photo Recovery hadda. Fadlan dooro nooca saxda ah ee OS. Plus, buugan ku salaysan yahay in Windows version of Wondershare Photo Recovery. Users Mac karto soo kabashada in talaabooyin la mid ah la version Mac.
3 Talaabada inay Qabtaan SD Card tirtiray Video Recovery
Tallaabada 1 Connect kaarka SD oo aad videos yihiin lumay aad computer iyo orod Wondershare Photo Recovery. Waxaad arki doontaa wax interface bilowday in bandhigayaa qalabka oo dhan oo ay taageerayaan ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in guji "Start" si ay u bilaabaan dib u soo kabashada.
Fiiro gaar ah: Iska hubi in kaarka SD aad si fiican ugu xiran kartaa adiga oo computer. Haddii kale barnaamijkan ma garan karaan oo waxa laga baarayo.
Tallaabada 2 drives All adag, oo ay ku jiraan card SD ee your computer lagu soo bandhigi doonaa barnaamijka. Si aad u soo kabsado tirtiray videos ka card SD aad, kaliya aad u baahan tahay inaad doorato card SD iyo guji "Scan" si ay u eegaan videos lumay waxa ku jira.
Tallaabada 3 Markii scan la dhammeeyo, dhammaan faylasha helay, oo ay ku jiraan videos tirtiray in kaarka SD aad ah loo baadho doonaa oo soo bandhigay bidix ee daaqadda. Waxaad ka eegi kartaa magacyada file si aad u hubiso in ay yihiin waxa aad rabto in aad dib u soo ceshano ama aan.
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan videos aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad u computer badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: ha u dib ugu card SD badbaadin inta lagu guda jiro dib u soo kabashada.